Dhibaata Abuurka Dhaqaale ku Doonku Dhankuu ka Socdaa! – Rasaasa News
Nov 18, 2009 ethiopia, Ogaden
Qaaraan maal ka dhaqdow, qadyad aan dhab ahayn weerar beela ku qaadow, qarankii is lahaa qoysba meel ku xidhow, wadaniyiinta qalow, qaraan baa la rabaa qoladiisa u sheegow, minweyntiis u qudbeeyow, doqon aan garba qaadanow, hadal kuu qarin maayo, qadyadii qararibto Ogadeen ku qardoof.
Warar hoose oo xog ogaal ah ayaa waxay sheegayaan in kooxda dambiile Jwxo-shiil, ay doonayaan in ay qaadaan olole balaadhan oo dhaqaale ay kaga uruursanayaan qurbo joogta Somalida Ogadeeniya ee aan wali ka warhaynin arimaha dhabta ah ee ay ku jirto kooxda dambiile Jwxo-shiil. Waxaana la filayaa in ay kulan been ah isugu yimaadaan, kaas oo uu Macalin Diirane Aayado lagu dawarsado u daliilindoono.
Kooxda Jwxo-shiil, oo sidii aan marar badan oo hore idiinku sharaxnayba ka kooban sadex qayb oo kala ah; Habro qurbaha ku raagay oo aan qalbi lahayn iyo wax ay ku maararoobaan toona, Ilmihii ay dhaleen oo waxbarashadii ka saaqiday shaqana aan heli karin iyo rag nolosha ka dhacay oo qaadka ku meheradaysta.
Jwxo-shiil, oo ku jira mushtar aan la ogayn, ayaa waxaa uu hanti ka sameeyey qaaraanka laga uruuriyo qurbo joogta Somalida Ogadeeniya, kaas oo kolkii hore ay ku taageeri jireen halganka ay ku jirtay ONLF, qaaraankuse haatan wuxuu qaatay waji ka gadisan wajigii lagu aqoon jiray wuxuuna qaatay waji lagu kala xoogsado.
Jwxo-shiil, oo aad xariif ugu ah xirfadaha dadka lagu jaha wareeriyo, ayey baryahan ka go,een lacagihii uu ka heli jiray qurbo joogta Somalida Ogadeeniya, hadaba si uu uga baxo cidhiidhiga dhaqaale iyo go,odoonka siyaasadeed, ayaa waxaa uu todobaadkii hore dagaal aan jiho lahayn ka riday labo tuulo oo ku yaal dhulka Somalida Ogadeeniya.
Dagaalka ka hor ayaa Jwxo-shiil looga yeedhay dalka Eritrea, halkaas oo lagu amray saraakiisha Eritrea ee jooga dhulka Somalida Ogadeeniya in ay dagaal ku qaadaan tuulooyin ayna joogin ciidamo Itobiyan ah, balse ay joogaan ciidamo boolis ah oo uu lee yahay degaanka Somalidu, si dhagaha dadka loogu rido in uu dhacay dagaal.
Hadaba, shirka ay isugu imanayaan daba joogta kooxda Jwxo-shiil iyo beeshiisa ayaa waxaa la rabaa in loogu ololeeyo dhaqaalo iyada oo la lee yahay, waxaa dhacay dagaalo xoog leh, waxaana loo baahan yahay in la helo dhaqaale si dawo loogu helo dhaawacyada.
Sida ay wararku sheegayaan, waxay kooxdu qorshaynaysaa in ay ku qorto qoys walba oo taageersan kooxda Jwxo-shiil iyo cidii kale ee ay wax ka heli karaanba lacag dhan $100.00, ololahan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya Habro uu Buufis dilooday oo wareega ka hela, oo doonaya in ay guryaha ugu tagaan dadka. Waxaa iyaga garab socda Odayaal uu hor boodayo duq Indho la,a oo ay Jwxo-shiil xigto yihiin aadna looga yaqaan London, kaas oo ay dadku yidhaahdaan lacagta qaaraanka ah ayuu dukaan kaga furtay Nairobi, kana guursaday haweeney, waxaa dadkan xaafadaha geynaya dhalinyaro ka saaqiday wax walba oo wata baabuur sharci daro ah iyaga laftigooduna aan sharci haysan.
Waxaa kale oo ay kaga hortagayaan qaaraankan, arimo kale oo ay wadaan beelaha Absame iyo Adeerkood, looguna talo galay in wax laggaga qabto xasarada ka taagan gabalada Jubooyinka oo ay dhibaatooyin xoog leh soo food saaraareen dadweynaha ku nool gabaladaasi. waxaanu hore u soo qoray in ay kooxda Jwxo-shiil, lugta jiidayso arimo la doonayo in lagu taageero shacabka gabalada Jubooyinka, waxaana isku af dhaafay Afada Jwxo-shiil iyo gabadha gudoomiyaha u ah haweenka beelaha Absame ee dalka UK.
Hadaba marka ay jiraan arimahaasi, waxaanu uga digaynaa qurba joogta Somalida Ogadeeniya, in ayna soo dhaweynin kooxda Jwxo-shiil, ee doonaysa in ay xaaraan kaga uruursato lacag gali doonta jeebka Jwxo-shiil. Waa in aad ogaataan Jwxo-shiil iyo kuwa la socdaa in ayna wadin dano halgan, arintaas oo aad kuligiin ka war haysaan in kooxdani ay amarka ka qaadato Eritrea ayna la mid yihiin Maamulka Kaalinka 5aad.
Halgankii ay waday ONLF, waxaa u dambaysay xili hore, haatan waxa socdaa waa wax u dhaxeeya Itobiya iyo Eritrea, ruux alaale ruuxii ku bixiya hal doolar oo kiis ah ha ogaado in uu dhibaato u gaystay dadweynaha Somalida Ogadeeniya, ogaada qaaraanka aad siisaan Jwxo-shiil, waxaa idiin dhaama idinka oo qaaraan siiyo Kaalinka 5aad iyo Cabdi Iley.
Halkan ka dhagayso nidaamka foosha Xun ee la doonayo in lacag lagu uruursado